Indlela yokwenza isifiso soNyaka omtsha we-2018 ukwenza ukuba izaliseke
U-Eva wonyaka omtsha akuphela nje kweholide. Lo ngumshini wangomzuzu osibamba sonke sisebuntwaneni, apho ihlabathi lingalawulwa nguokumkani noongameli, kodwa ngomlingo. Hayi, ewe, ngokubonakala ngathi sihlala sikhulile abantu abanokugxekwa okanye ukuzithiba baphika zonke iintlobo zemimangaliso apho. Kodwa umphefumlo wethu ngumntwana ongunaphakade ongenakwenza ngaphandle kweNkcazo yeNtsha entsha kunye nokuzaliseka kweminqweno. Ngaba unako ukucaphukisa umntwana? Hayi? Ngoko kutheni ungathathi ngokungathandekiyo iimfuno zomphefumlo kwaye uyayiphika into encinci?
Musa ukungabaza izicelo zakhe. Yena, nangona uqobo ungumntwana, unobulumko bendalo yonke, kwaye uyazi kakuhle into oyifunayo. Myeke ukulawula ingqondo yakho ubuncinane ubusuku obunye ngonyaka, kwaye ubone ukuba ubomi bakho buya kutshintsha kangakanani. Kwaye ukuba iBhola entsha yomnqweno weNtsha ulawula umphefumlo, ngoko ingqondo kufuneka ilandele indlela yokuzaliseka kwayo. Thina sibadala kwaye siyaqonda ukuba imveliso yemimangaliso, yinto imilingo, kodwa imveliso, kunye nezicwangciso, amacebo kunye nemiyalelo ebekwe kuyo. Ukubalandela, siza kufunda indlela yokuqiqa ngokufanelekileyo iminqweno kwaye singayimiseli imimangaliso ekuphumezeni.
Ngoko, masiqale! Wenza njani umnqweno ngo-Eva wokugqibela? Ngaphantsi kwelifa le-chimes, urekhode kwi-napkin iphupha, ngathi: "Ndifuna iRange Rover ebomvu!" Okanye "Ndifuna ukutshata noPetya!" Okanye "Ndifuna indlu yam yokuhlala!". Emva koko watshisa iqhekeza lephepha, waliphosa kwi-champagne waza wisela. Phantse njalo? Kwaye banako? I-Blue Zhiguli "isandla sesibini", intombazana ethandana noPetka kunye nendawo yokudlala emilenzeni yenkukhu, uHochma akunike yona ngeHalloween? Yaye yintoni na umgxeki wakho ongunaphakade kunye nengqondo yokugxekayo athi kuwe? "Hayi ukuba unentloni ngexesha lakho ukukholelwa kwiingcambu! Ukunxusa kunye nobudenge! ". Ngaba watsho oko? Kwaye nithini na? Bavumelana okanye bambonisa ulwimi: "Nokuba kunjalo, andiyi kulila iphupha, kuba lilungile"? Lo mzekelo, ulungiswe ngamanqanaba athile, uphinda phinda phantse yonke iminyaka emva konyaka kwaye sele sele uzalisekile ngokuqikelela kwayo. Kodwa ukuba awuyithandi umphumo, ke lixesha lokutshintsha isenzo. Kwaye oku kuya kufuneka wenze iimpazamo kwaye ufumane umgaqo osisimangaliso wokuzaliseka kweminqweno yoNyaka omtsha:
Umnqweno wo buxoki. Ngokuqhelekileyo, ukwenza isifiso, asiyiqondi intsingiselo yayo yinyani. Kukho ukutshintshwa kweengcamango. Le ngenye yezizathu eziphambili ezithintela ukuphunyezwa kwesicwangciso. Umzekelo:
"Ndifuna ukutshata noPetya!" Yaye yena, umnqweno, akafuni! - Kutheni ufuna iPetya? - Upholile! Unemoto ye-BMW X5, imali, abazali baseMerika kwaye uyabonakala. "Ngaba kunengqiqo?" - Hayi, kungekhona kuyo. Kwaye ndiyakwazi ukubonakala ndonwabile, ndihamba, wonke umntu uya kumnceda aze ndikhwele. "Kodwa uPetya akuyona yodwa indlela yokufumana konke." - Ngokubanzi, ewe. - Ngoko, uPetya akayinjongo (iphupha), kodwa indlela yokufezekisa.
Ifomula: Khangela imbangela yangempela yeminqweno yakho. Kuya kuba yiphupha lakho ngamathuba aphezulu okusebenzisa.
Ukwenzakala ngokungalunganga. Kunzima kwiofisi ephakamileyo ukuzalisekisa umnqweno wakho, ukuba ayithethi. Amathuba amakhulu okuphunyezwa ayenomyalelo ocacileyo owenziwe ngokucacileyo kunye neenkcukacha. Ngaphandle koko, kunokuthi iphupha ayinakuphikiswa - yaqaphela, kodwa yaba yindlela engafanelekanga. Ubunzima ngokuthe ngqo, kungekhona iphupha! Umzekelo:
- Ndifuna ukuthandwa! - Yamkela uze ungene ngemvume kwi-risithi! - Yintoni le? Kutheni ndifuna le losizi? Ngaphandle kokundityhutyha ngothando lwakhe, akukho nto inokuyenza! Incwadi yendiza ndiyifunayo! - Ndixolele, ndiyaxolisa, kodwa andizange ndenze isicelo somntu onamandla.
Ifomula: Isifiso kufuneka sibe yinto ecacileyo ngokunokwenzeka.
Umfana usebhasini ukuze asebenze. Uhlala phantsi, ekhwankqisayo aze acinge: - Ubomi bubuqili, umfazi uyintonga, umphathi uyisibastard esingenabongi ... Emva kwakhe ingelosi eneencwadana kwaye ibhala: "Ubomi bubuhlungu, umfazi we-bitch, u-boss bastard ..."! Ucinga ngelosi. - Kwakhona okufanayo. Ewe, ukuba uyala, kufuneka uyenze. Ngaba ihlekisa? Akunjalo. Ngokukodwa xa kukho ukuqonda ukuba iingcamango ezingqondweni zabo zihlala zibi. Kanti uvelisa iminqweno efanayo: "Andifuni ukugula!" I-Ofisi ePhakamileyo iva "Ndifuna ukugula," kwaye ekupheleni konyaka ungenza i-Encyclopaedia of Diseases evela kwizifo ozidlulisele kuyo. - "Andifuni ukusebenza!" Iofisi ephezulu iva "Ndifuna ukusebenza," kwaye ngoku, kungekude neenyanga ezintandathu zidlulile, njengoko ufumana inqaku elihloniphekileyo lehashe ebiwe.
Ifomula: Isifiso sifanele sichaze oko ufunayo, kwaye akusikho into ofuna ukuyiphepha.
Ngaba ufuna ukufumana iphupha kwimpilo elandelayo? Emva koko uyiqulunqe njengale: "Ndiya kuba mncinci kwaye ndihle!" Le nto "iya ku" isoloko ikhona kwikamva elingenakwenzeka, elingenakuze lifike. Kunene: "Ndiyindoda, ndiyindoda kwaye ndiyi-kg kg!"
I-Formula: Isifiso sifanele sibonise umphumo wokugqibela, kwaye size senziwe ngexesha langoku.
Ukungasebenzi. Ekubeni singabantu abadala, kwaye siyaziqhayisa, ngoko masiqonde ukuba inkcazelo yenkwenkwezi ingqondo, kwaye ukuqonda kwayo yinto yokwenyama. Ngoko ke, ukuze uqaphele intsingiselo yakhe yefayile, omnye makangacacisi ngokucacileyo kwaye ngokucacileyo enze iinjongo, kodwa abuye athathe imilenze "yomzimba" ekujoliswe kuyo. Ukuba umnqweno awunawo amandla enjongo yokuwuqonda, eli phupha livela kwimiba yabo malunga nabo bathi: "Musa ukuchukumisa iphupha lam! Ukuba kuzalisekile, ndiya kuphupha ntoni na? "
Ifomula: Umnqweno kufuneka unqwenele ngobuqotho. Ungakhathazeki ngeendlela zokuphunyezwa kwayo. Leli ofisi yasezulwini. Kufuneka kwakhona "ulungiselele imilenze" kwaye ukholwe.
Ukungabaza. Awu, okungaqiniseki ndawo-ngaphakathi kwabo, ephupheni, kwithuba lokwenene lokufumana. Kwaye ilizwi likamama: "Awukwazi ukwenza oko!", Okanye uPapa: "Oku akunakwenzeka!", Okanye umhlobo ophumelele ngakumbi: "Awunikelwa!" La mazwi akhupha ilizwi eliphambili - ilizwi lomphefumlo, okhala ngokukhawuleza iimvakalelo: "Ndiya kuyenza! Ndiyakwenza! Ndiyazi indlela! Yithemba! "Mamela entliziyweni yakho, uze uzijikeleze nabantu abaye bafezekisa oko ufunayo kuphela. Bayazi ngokuqinisekileyo ukuba inkcazelo yamanqaku ingenziwa yinyani!
Iformula: Umnqweno kufuneka ^ Ewe, akukho mntu, kwaye akukho nto ifanele! Ukuba ufuna, uya kwenza konke, nokuba awuzange ukwazi ukwenza oku kunoma yimuphi umntu eMhlabeni. Yonke into esasijikelezile yayiyiphupha lomntu. Thatha ilungelo lokuba nephupha lakho! Kwaye awuyi kubhala ephepheni. Kumele kwaziwe ngomphefumlo.
Iipastadi ezintle kakhulu ezinokuxolelwa ngeCawa, ngo-2018: kunye nemibhalo, nincoma, imibongo
Itheko lokuvuna - iziganeko zezikolo eziprayimari, abafundi abadala, abadala kunye nabahlala phantsi. Ukuncintisana kwe-Autumn kumthendeleko wokuvuna kwindlu yenkcubeko kwidolophana
I-Stengazeta (iphosta) yoSuku lukaMama 2017 enezandla - iithemplethi kunye nemifanekiso yesithili kunye nesikole
Qhawula i-українські народні для дітей. Izitya kunye nevidiyo yeefolishi ngezobugcisa baseUkraine
Izibingelelo ukususela ngoSeptemba 1 ukuya kootitshala: ukusuka kubafundi kunye nabazali, abahlekisayo nabachaphazelekayo bayamncoma abo basebenza nabo kwi prose nevesi
Imincintiswano yeHalloween esikolweni, ekhaya kwiphathi, kwiqela. Imidlalo ye-Halloween yabantwana, intsha kunye nabafundi
Amanqaku omnyaka omtsha we-2018 kwi-kindergarten kunye nesikolo ngezandla zabo ezenziwe ngephepha, bazive, iimbonki
Kunokuba iminquma kunye neoli yeoli iyanceda
Inkomfa yezemidlalo ekhaya kwabasetyhini
Uphuhliso lomculo lomntwana
Ukupheka okumnandi kokutya okunempilo
Ubuhle kwindlela yaseMelika: ukuqokelela ijee uPaige Denim 2017
Ukugcoba nge-gel-verarn ekhaya
Isidlo kunye namazambane ahlambulukileyo
Isonka kunye nama-artichokes, ushizi kunye negalikhi
Indlela yokuhlobisa iibhothi eziziwayo
Unyango lwengqungquthela ngamanyathelo omntu ngexesha lokukhulelwa
Ngaba iziphuzo zamandla ziyingozi?
Uma Thurman - umbane wezandla
Indlela yokufundisa umntwana ukuba adle ngokuzimela?
ULera Frost: i-biography, isithombe phambi nangemva kweplastiki
Imibongo emfutshane yoMnqophiso onguNyaka omtsha kwi-kindergarten kunye nesikolo
Ukuzivocavoca kwi-yoga ukuphakamisa ithoni kunye nemizwa
Ngaba uPutin unomdla olutsha? Isiqwenga "se-KVN-55 iminyaka": Luhlobo luni lwe-blonde ebehleli phantsi komongameli?